Iindaba -Isixhobo sefilitha sokucoca amanzi kufuneka sitshintshwe rhoqo. Ngaba kunokwenzeka ukuqhubeka nokuyisebenzisa? Uya kuqonda emva kokufunda
Amacebo okucoca amanzi okuhlamba
Isixhobo sefilitha sokucoca amanzi kufuneka sitshintshwe rhoqo. Ngaba kunokwenzeka ukuqhubeka nokuyisebenzisa? Uya kuqonda emva kokufunda
Isixhobo sefilitha sokucoca amanzi esifakwe ekhaya siyatshintshwa rhoqo. Ngaba ndingayihlamba kwaye ndiqhubeke nokuyisebenzisa? Ayilunganga le nto!
ukhuseleko lokusetyenziswa kwamanzi ngokubanzi, Siyakholelwa ukuba amakhaya amaninzi afake izixhobo zokucoca amanzi. Amanzi empompo aphuma emva kokucocwa ngumcoci wamanzi kwaye ahluzwa ukwenza umgangatho wamanzi ucoceke kakhulu. Amanzi empompo anokucocwa, ubukhulu becala, ikhredithi yento yokuhluza. Inye nganye yeefilitha zokucoca zicoce umthombo wamanzi, kwaye okokugqibela isihluzi sivale ukungcola.
Ngenxa yoku, into yecebo lokucoca ulwelo iya kuba mdaka emva kwexesha elide lokusetyenziswa, kwaye iya kuphulukana nomsebenzi wokucoca amanzi. Ngeli xesha, into yecebo lokucoca ulwelo ifuna ukubuyiselwa endaweni ukuze iqhubeke nokusebenzisa isicoci samanzi. Emva kokusebenzisa isicoci samanzi, abahlobo abaninzi bakhankanye ingxaki, oko kukuthi, indleko yokusebenzisa isicoci samanzi ukubuyisela into yesihluzo kungekudala iza kudlula kwixabiso lokucoca amanzi.
Ngapha koko, kunjalo. Ixabiso lomcoci wamanzi malunga namaqhekeza aliwaka. Nangona kunjalo, isicoci samanzi sinezinto ezininzi zokucoca ulwelo, ezinye zininzi zezinto zokucoca ulwelo, kwaye ezinye amakhulu ezinto zokucoca ulwelo, kunye nezinto ezithile zeefilitha zithatha iinyanga ezininzi. Ifuna ukutshintshwa kube kanye qho kwiinyanga ezintandathu okanye kube kanye ngonyaka. Ixabiso lezinto zokucoca ulwelo kunye nexabiso lesiza lokutshintsha indawo yeefilitha liphezulu kakhulu.
Abanye abahlobo bacebise ukuba kuba kubiza kakhulu ukutshintsha isihluzo, ngaba ungasikhupha uze uzihlambe ngokwakho emva koko usebenzise? Yihlambe ngamanzi uphinde uyibuyisele kwakhona, ngaba iyakuchaphazela ukusetyenziswa kwayo?
Okokuqala, ulwakhiwo lwecebo lokucoca ulwelo alukho lula njengoko sicinga. Isixhobo sokucoca sahlulwe sizixhobo ezahlukeneyo zokucoca ukungcola okukhulu okuncinci kunye nokuncinci. Sithatha into yecebo lokucoca ulwelo, kwaye konke esinokukwenza kukususa umphezulu wento yokuhluza ngamanzi. Kuyenzeka ukuba kuhlanjwe ukungcola, kodwa akukho siphumo sincinci.
Isihluzi esitsha sihlala simhlophe ngenkangeleko, kwaye sinokuba mnyama okanye sibemdaka emva kokusebenzisa ixesha elithile. Oku kukuthengisa kwezinye izinto ezingcolileyo. Ezi zinto azinakucocwa kuphela ngokuhlamba ngamanzi. Nokuba umphezulu ucocekile, umphumo wokuhluza awunyanzelekanga Inokuqinisekiswa into yokuba wonke umntu uthenga izinto zokucoca amanzi ukuze acoce umthombo wamanzi, kwaye athathe indawo yokuhluza engcolileyo. Ngapha koko, isangcolisa umthombo wamanzi.
Ke ngoko, kwezempilo kunye nokukhuselwa kokuqwalaselwa, akufuneki ulibazise ukubuyisela into yecebo lokucoca kunye nokucoca isihluzo ngokwakho. Ukusetyenziswa okufanelekileyo kwesixhobo sokucoca ulwelo kungenza isicoci samanzi sicoceke ngokwenene. Uhlobo lwesicoci samanzi nalo lwenzile utshintsho olukhulu. Abanye babahlambululi bamanzi banokutshintsha ngokulula kwesihluzi. Ungayithenga into yecebo lokucoca ulwelo endaweni yalo. Kukho izinto ezintsha esele zisetyenzisiwe. Ukuba awufuni kutshintsha isihluzo rhoqo, unokufaka endaweni yokucoca amanzi yakudala ekhayeni lakho ngokulula.
Ixesha Post: Jul-09-2020
Ukucocwa kwaManzi eXuzhou Xinpaez